Wa people - Offline Wikipedia
- updated 2021/09/22 02:54
^ တိုင်းခုနစ်တိုင်းကို ���ိုင်းဒေသကြီးများအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသများ ရုံးစိုက်ရာ မြို့များကို လည်းကောင်း ပြည်ထောင်စုနယ်မြေတွင် ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်များကို လည်းကောင်း သတ်မှတ်ကြေညာ. Weekly Eleven News (in Burmese). 2010-08-20. Retrieved 2010-08-23.